Crystal Led Ceiling Light အလှဆင်မီး
အိမ်တစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Hotel မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက် Decoration ကသိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အလင်းရောင်ရဖို့အတွက် မီးရွေးချယ်ရာမှာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လှပသေသပ်သော Ceiling Light ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးတဲ့ အလှဆင်မီးဟာဆို လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်စေပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ရုံးခန်း၊ Hotel၊ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း အစရှိတဲ့ လူနေအိမ်တွေမှာ လှပတင့်တယ်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေအတွက် Ceiling Light ကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ Remote Control System ဖြစ်ပါတယ်။
60 LED PIR Security Light &amp; Solar Panel
ရာသီဥတုက တဖြည်းဖြည်းချင်း ချို့ယွင်းပျက်စီးလာပါပြီ။ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီတို့နှင့် ကားမောင်း၊ မီးစက်နှိုးခြင်း တို့ကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ်များ လွန်ကဲလာပြီး ရေကြီး၊ ငလျင်လှုပ်စသော သဘာဝဘေးများ ကြုံလာရ ရုံမက ကျန်းမာရေးပါ ထိခိုက်လာကြသောကြောင့် Green Energy အစီအစဉ်ဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည့် ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကို ဦးစားပေး အသုံးပြုလာကြပါသည်။ ပြည့်မြဲစွမ်းအင်များတွင် ဆိုလာစနစ်သည် အကောင်းဆုံးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်အကင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုထားသည်ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာတဝှမ်း အသုံးများသည့် Lighting တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ 60 LED PIR Security Light &amp; Solar Panel သည် (၁) ဆိုလာစနစ်သုံး ဖြစ်သောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အရပ်ဒေသများတွင် သုံးနိုင်ရုံသာမက လျှပ်စစ်မီးရှိသော မြို့ပြများတွင်ပါ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မီးပျက်လျှင်လည်း ပွဲမပျက်အောင် ထိန်းနိုင်သော second energy ဖြစ်ပါသည်။ (၂) လင်းအားကောင်းသော LEDမီးလုံး ၆၀ အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၁၅မီတာ (၄၅ပေ)ပတ်လည် အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်နိုင်ပါသည်။ (၃) PIR Sensor စနစ်ပါဝင်သဖြင့် ၁၈၀ဒီဂရီ ပတ်လည်၊ ပေ၁၃၀အတွင်း လူဖြတ်သွားသည်နှင့် မီးလင်းပေးသော အာရုံခံစနစ်ကြောင့် ညည့်နက်သန်းခေါင် မှောင်မိုက်နေချိန်တွင် အလစ်အငိုက် ဝင်ရောက်လာသော သူခိုး ဓားပြတို့အား အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။ (၄) လူဖြတ်သွားမှ လင်းပေးသောစနစ် (Auto) အမြဲလင်းပေးသောစနစ်(ON) ပိတ်(OFF) ခလုတ်၃မျိုး ရွေးချယ်နိုင်သဖြင့် နေရာအမျိုးမျိုး အချိန်အမျိုးမျိုး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (၅) အာရုံခံစနစ်၏ အနီးအဝေး (SENS) မီးလင်းကြာချိန် (TIME) မီးအလင်းရောင်အလင်းအမှိန် (LUX) တို့ကို လိုသလို ချိန်ညှိနိုင်သော Control များလည်း ပါရှိပါသည်။ (SENS) စနစ်တွင် ၈မီတာမှ ၁၅မီတာအတွင်း လူဖြတ်သွားမှ လင်းပေးသောစနစ်၏ အာရုံခံမှုကို အနီး/အဝေး ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလာပါဝါ 1.2W 9V အသုံးပြုထားပြီး အားအပြည့်ရှိပါက ၅နာရီဆက်တိုက် ထွန်းထားနိုင်ပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟိုတယ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဥယျာဉ်ပန်းခြံ၊ တရားရိပ်သာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်ဒ်များအတွက် အရေအတွက်များများ ၀ယ်ယူပါက လက်ကားဈေး ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက 09-263430191, 09- 777918199, 09- 777918211 တို့ကို ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ မြို့နယ် နှင့် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တို့ကို မေးမြန်း မှာယူနိုင် ပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန် မြို့တွင်း Door to Door အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။ ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။ အခြားနယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
3T6 သည် CREE LED T6 အမျိုးအစား လင်းအားအလွန်ကောင်းသော မီး၃လုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး 1T6 သည် အလယ်မီးကြီးတစ်ခုသာ CREE LED T6 ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဘေးဘက် မီး၂ခုမှာ သာမန်မီးဖြင့်သာ ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ညဘက် ခြေလျင် ခရီးထွက်ခြင်း၊ အုံ့ဆိုင်းညိုမှိုင်းသောတောင်တက်ခြင်း၊ တောပစ်ထွက်၊ တောလည်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး သတ္ထုတွင်း လုပ်ငန်း၊ လျပ်စစ်မီးမရသောနေရာတွင် ညဘက် စာကြည့်၊ စက်ပြင်၊ ကျောက်ရွေး စသည့် ကိစ္စများအတွက် အလင်းစူးအားကောင်းသော CREE LED T6 ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခေါင်းစွပ်ဓာတ်မီး ဖြစ်ပါသည်။ 3.7V ဓာတ်ခဲ၂လုံးပါဝင်ကာ အကြိမ်၅၀၀အထိ အားသွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး တစ်ကြိမ်အားသွင်းလျှင် ၁လုံးတည်း ၆နာရီဆက်တိုက် ထွန်းနိုင်ပါသည်။ အားသွင်းသည့် ကြိုးလည်းပါရှိသည်။ ခလုတ်၁ခုသာ ပါရှိပြီး (၁ )အလယ်၁လုံး၊ (၂ )ဘေးနှစ်လုံး၊ (၃) သုံးလုံးတပြိုင်နက်၊ (၄) သုံးလုံးပြိုင်တူ မှိတ်တုတ် အချက်ပြ (၅) Off ဟူ၍ တဆင့်ချင်းနှိပ်ကာ ရွေးချယ်ထွန်းနိုင်ပါသည်။ အလင်းစူးအား ၁မိုင်ခွဲအထိ ရောက်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ ၁မိုင်ခွဲအဝေးမှလူသည် ၎င်းမီးရောင်ကို တွေ့နိုင်၏။ ဦးခေါင်း အရွယ်ကြီးငယ်မရွေး တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသားအရေမထိခိုက်စေသော ရော်ဘာ+ချည်သား ပေါင်းစပ်ထားသောကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဗို့အားပိုများသည့်ဘတ္ထရီနှင့် ထည့်သုံးခြင်း၊ ရေဝင်ခြင်း၊ ကြိုးပြတ်ခြင်း တို့မှလွဲ၍ မီးလုံးသည် နာရီပေါင်းတစ်သိန်း ဆက်တိုက်ထွန်း ၊ မကျွမ်းနိုင်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ ညအမှောင်တွင် စက်ဘီးစီးပါက ရှေ့သို့ ဆိုင်ကယ်မီး ထွန်းထားသည့် အကွာအဝေးလောက် မြင်နိုင်ပြီး နောက်မှ မီးနီတစ်ခုပါရှိသောကြောင့် နောက်ကားများအခန့်မသင့်၍ ဝင်တိုက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေး RESCUE အဖွဲ့များအတွက် အကောင်းဆုံးသော အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို့ကို ဖုန်းဆက်၍ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ မြို့နယ် နှင့် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တို့ကို မေးမြန်း မှာယူနိုင် ပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း Door to Door အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။ ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။ အခြားနယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
Bagatelle 1 Light Pendant အလှဆင်မီး
အလွန်သန့်ရှင်း ကြည်လင်တဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြုထုတ်လုပ်၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bagatelle မီးဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Made in USA ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစ်စရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးဆိုင်းအလှများ တပ်ဆင်လိုပါက Email (or) Chat Box ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အလွန်သန့်ရှင်း ကြည်လင်တဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြု၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bagatelle မီးဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ နံရံကပ် အလှဆင် တစ်လုံးမီးဖြစ်ပါတယ်။ Made in USA ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစ်စရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးဆိုင်းအလှများ တပ်ဆင်လိုပါက Email (or) Chat Box ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
7 Light Crystal Chandelier မီးဆိုင်း
အလွန်ကြည်လင်တဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြု၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bagatelle မီးဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Bagatelle အလှမီးဆိုင်းတွင် မီးသီး ၇ ဖြင့် အလှဆင်ထားပါသည်။ Made in USA ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစ်စရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးဆိုင်းအလှများ တပ်ဆင်လိုပါက Email (or) Chat Box ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြု၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bagatelle မီးဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Bagatelle အလှဆင်မီးဆိုင်းတွင် မီးသီး ၁၁လုံး ဖြင့် အလှဆင်ထားပါသည်။ မီးလုံး တစ်လုံးချင်းစိအတွက် ဝါယာကြိုးတစ်လိုင်းချင်းစီ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Made in USA ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစ်စရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးဆိုင်းအလှများ တပ်ဆင်လိုပါက Email (or) Chat Box ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Cadence5Light Chandelier မီးလုံး ၅ လုံးပါ မီးဆိုင်း
အလွန် ကြည်လင်တဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြု၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bagatelle မီးဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Bagatelle အလှဆင်မီးဆိုင်းတွင် မီးသီး 5လုံး ဖြင့် အလှဆင်ထားပါသည်။ မီးလုံး တစ်လုံးချင်းစိအတွက် ဝါယာကြိုးတစ်လိုင်းချင်းစီ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Made in USA ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစ်စရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးဆိုင်းအလှများ တပ်ဆင်လိုပါက Email (or) Chat Box ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
SOLAR ROAD LAMP (နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီးတိုင်)
ဒီနေရောင်ခြည်လမ်းမီးတိုင်သည် 10W LED ဖြစ်သောကြောင့်ဒါဟာပြင်ပ အလင်းရောင်ထက် လမ်းတွေ,လမ်းမများ,ကားရပ်နားရန်နှင့်ပန်းခြံများတွင် အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေပါသည်။နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုထားသည့် အတွက်ကုန်ကျစရ်ိတ်သက်သာပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုလဲခြွေတတာရာရောက် ပါသည်။
LED Solar Traffic Light &amp; Countdown
ဒီ signal ကိုအထူးစက္ကန့်အရေအတွက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုထားပြီးကားဒရိုင် ဘာများဘေးကင်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးဒရိုင်ဘာတွေကိုအ ထောက်အကူပြုဖို့ဂဏန်းများကိုအမြင့်ဆုံးအရေအတွက် 99 စက္ကန့်ထိပြုလုပ် ထားပါသည်။
SOLAR LAWN LAMP (မြက်ခင်းပြင်သုံးမီးအိမ်)
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမြတ်ခင်းပြင်သုံးမီးအိမ်သည် လူနေရပ်ကွက် ပန်းခြံများ တွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သောမီးအိပ်ဖြစ်ပါသည်။
Solar Panel with Bag (နေရောင်ခြည်သုံး အိပ်)
ဒီထုတ်ကုန်ကတော့အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဖုန်းကဲ့သို့ သောဒီဂျစ်တယ်ထုပ်ကုန်တွေကို အလွယ်တကူအားသွင်းနိုင်ပြီးအသုံးပြုမှု လွယ်ကူသောခေါက်ဒီဇိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ် စောင့်ရောက်ရေး စွမ်းအင်ကိုချွေတာပေးပါသည်။
Paint Curing Lamp/Infrared Heater (SL-3A)
1. Making from aluminum alloy, 304 grade bright stainless steel reflector and other special materials 2. Equipped with IRA infrared shortwave heating tubes(Osram, gold-plated optional.). Over8000 hours of lamp life. 3. Fully automatic device, digital display electronic timer, the figures show that the percentage of power, pulse function. 4. Hydraulic lifter, 360 degrees rotation is available, independent switch 5. Routine and plus preheat curing function 6. Fully automatic overload protection 7. Each emitter can be controlled respectively 8. Base make of steel tube.
အဆိုပါ HERA Series LED လမ်းမီးအိမ်ကို SMD/DOB အလင်းဖြင့် အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ RL355160SMD မီးအိမ်တွင် မော်လီကျူးများ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို အသေအချာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် အပူလွန်ကျူးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ သတ္တုပစ္စည်းများကို တာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်အောင် အလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရသည်။အဆိုပါ မီးအိမ်ကို လမ်းမီး နှင့် အမြန်လမ်းမ ပေါ်တွင် အလင်းအားကောင်းပြီး တာရှည်အသုံးခံမှုကြောင့် အသုံးပြုသင့်သော ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စား၍ ဝယ်ယူလိုပါက Changi-Light Myanmar Showroom သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
<p>BaganMart.com is right place for Lighting Products in Myanmar. You can buy and sell lighting lamp,lighting furniture,sola panel,chandelier,LED light in Myanmar. You just type the words in search bar depend on what you want to search. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process.&nbsp; You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.Thanks for your interest in BaganMart.com.<br></p>